‘नेतृत्वको शिरबिन्दुबाट अन्यायको थालनी भएको छ’– झलनाथ खनाल - संवाद - नेपाल
झलनाथ खनाल | तस्बिरहरु : रवि मानन्धर
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनप्रति सन्तुष्ट छैनन् । आफ्नो अनुपस्थितिमा वरीयताक्रममा आफूलाई चौथोमा झारेकामा उनले अहिलेसम्म चित्त दुखाएका छन् । सरकारको पक्षमा ०५२ मा जस्तो कुनै लोकप्रिय लहर नआएको र चार महिनासम्म पार्टीका तल्ला कमिटी एकीकरण हुन नसकेकामा पनि उनी चिन्तित छन् । खनालसँग जनक नेपालको प्रश्न :
पार्टी एकता कहाँ पुग्यो ?
पार्टी एकता घोषणा गरेको ३ असोजमा चार महिना पुग्यो । पार्टीका सबै तल्ला अंगहरू विघटित छन् । अहिलेसम्म एकीकरण हुन सकेको छैन । कार्यदलहरू बनाएर जुन हिसाबकिताबले एकता गर्न खोजियो, त्यसबाट सम्भवै थिएन । जथाभावी ढंगले आ–आफ्ना मान्छेलाई माथि ल्याउने प्रयत्न गरियो । हामीले सचिवालय बैठक बसेर मापदण्ड बनाएरै एकता गर्न भनेका छौँ ।
पार्टी एकतामा तपार्इं सुरुदेखि नै असन्तुष्ट देखिनुको कारण ?
पार्टी एकता नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक घटना हो । म चीन भ्रमणमा रहेका बेला पार्टी एकीकरण भयो । त्यसैले घोषणामा सहभागी हुन पाइनँ । म नभएका बेला पार्टीको वरीयता तोडेर तल र माथि बनाउने काम भयो, त्यो नेकपाभित्रको सबैभन्दा ठूलो अन्याय हो । नेतृत्वको शिरबिन्दुबाट अन्यायको थालनी भएको छ । न्याय र समानताका निम्ति कम्युनिस्ट पार्टीमा लाग्ने हो । तर, त्यहीँभित्र अन्याय भयो भने कसरी सहन सकिन्छ ?
कसैको वरीयता नतोडेरै दुई पार्टीको एकीकरण सम्भव होला त ?
निश्चित मापदण्ड र आधार पहिल्याएर वरीयता निर्धारण गरे कसैले विवाद गर्दैन । मेरो वरीयता सम्बन्धमा पार्टीको कुनै पनि कमिटीले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । त्यसैले सचिवालयमा मैले मापदण्ड बनाएर सबै नेताको वरीयता तोक्न माग गरेको छु । त्यसरी निर्धारण गर्दा जेएन खनाल उन्नाइसौँ नम्बरमा परे पनि मलाई आपत्ति छैन । तर, यो टीका लगाएर वा क्रेन लगाएर तल र माथि पारिने कुरा ठीक होइन ।
पार्टीमा दुई अध्यक्षको मात्र सक्रियता देखिन्छ । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी सक्रिय नहुनुको कारण के हो ?
हामीसँग केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटी र सचिवालय छ । सचिवालय भनेको पार्टीका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने संस्था हो । तर, अहिले निर्णय गर्ने संस्थाका रूपमा हामीले सचिवालयलाई विकास गर्न खोजिरहेका छाँै । स्थायी कमिटीलाई निर्णायक संस्था बनाउनुपर्ने हो । स्थायी कमिटीले निर्णय गर्ने र सचिवालयले कार्यान्वयन गर्नासाथ पार्टी सुल्टिएर सही दिशामा अगाडि बढ्न थालिहाल्छ ।
पार्टी उल्टो ढंगले चलिरहेको हो ?
कुनै व्यक्तिविशेषलाई आरोपित गर्नुभन्दा पनि पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली हुनुपर्छ । कमिटी र सामूहिक नेतृत्वको प्रणाली भएन भने कम्युनिस्ट पार्टीको ज्यान जान्छ । कमिटी प्रणालीलाई पार्टीको ज्यान मानिन्छ । यी कुरालाई अभ्यासमा ल्याउन छाडिए पार्टी संकटमा पर्छ । अहिले नेकपाभित्र भएको त्यही हो । जस्तै, यत्रो मन्त्रिपरिषद् बन्यो, पार्टीको कुनै कमिटीले निर्णय गरेको छैन । योजना आयोग बन्दा कुनै कमिटीको निर्णय चाहिएन ।
पार्टीभित्र गुटबन्दी कस्तो छ ?
एकताअघि पूर्वएमाले र माओवादीमा विभिन्न गुटहरू थिए होलान् । अहिले पनि गुट छन् । तर, त्यही रूप र भूमिकामा छैनन्, ब्लकहरू हुन सक्छन् । यो नेता मिलेर बनेको पार्टी हो । तर, पार्टी चल्ने भनेको विधि र नीतिले हो । जब विधि र नीति मिच्न थालिन्छ नि, त्यो पनि माथिबाट मिच्न थालेपछि तल विभिन्न गुट र समूह जन्मिन थाल्छ । ‘नम्बर वान’ नेताले गुटबन्दीबाट मुक्त हुनुपर्छ । ‘एस म्यान’ बनाउने, आफ्ना मान्छेलाई संरक्षण गर्नेभन्दा पार्टीका निम्ति काम गर्ने मान्छेलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । यो सिंगो पार्टीले नम्बर वान नेताबाट जुन खालको भूमिकाको अपेक्षा गरेको थियो, त्यस्तो भइरहेको छैन ।
यो सरकार असफल भयो भने त हाम्रो सिंगो पार्टी पनि डुब्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि डुब्छ ।
तपाईंको वरीयता घटुवामा स्वास्थ्य र बिजनेसलाई कारण भनिँदो रहेछ । त्यस्तो हो ?
मैले के बिजनेस गरेको छु ? तपार्इंले केही देख्नुभएको छ ? म कुनै बिजनेसमा छैन, गर्दा पनि गर्दिनँ । तर, केही दुष्ट र तुच्छ तत्त्वले मेराविरुद्ध यस्ता तथानाम प्रचार गरेर अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्ने कोसिस जुन ढंगले भइरहेको छ, यसको कारण पार्टीभित्रको अस्वस्थता पनि हो । मेरो स्वास्थ्य ठीकै छ ।
दुई अध्यक्षका गुट बनिसके भनिन्छ । तपार्इं कुन गुटमा हुनुहुन्छ ?
म कुनै गुटमा लाग्दिनँ । मलाई गुट बनाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । मेरो गुट या पार्टी भनेकै यही नेकपा हो । गुट बनाउने भए हिजै बनाइसक्थँे । अहिले पनि बनाउनैपर्‍यो भने म सबैभन्दा ठूलो गुट बनाउन सक्छु ।
एकताअघि नै नेकपामा महाधिवेशनको नेतृत्वको दौड देखिन्छ । त्यो दौडमा तपार्इं हुनुहुन्छ ?
दुई वर्षपछि हुने महाधिवेशनमा मेरो के भूमिका हुने भन्नेबारे अहिले साथीहरूसँग सरसल्लाह गर्दैछु । नेता, कार्यकर्ताले दिएका सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्छु । नेता, कार्यकर्ताले दिएको जुनसुकै जिम्मेवारी लिन तयार छु ।
सरकारले सात महिना पूरा गरेको छ । तपार्इं कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
स्वाभाविक रूपमा अब सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला हुन थाल्यो । म ०५२ को घटना सम्झिन्छु । कमरेड मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार बन्दा तीन महिना पुग्दा–नपुग्दै मुलुकव्यापी समर्थनको एउटा लहर आएको थियो । त्यो लहरको तुलनामा यो सरकारले ७ महिनामा त्यस्तो कुनै लहर ल्याएको छैन । जुन ढंगको गति लिनुपर्ने थियो, त्यो अझै लिन सकेको छैन ।
पार्टी शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श हुँदैन ?
सामूहिक नेतृत्वको आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको भए यो सरकारको संरचना अलि भिन्नै हुन्थ्यो । प्रतिबद्धता पनि भिन्न हुन्थे । कम्तीमा अहिलेभन्दा बढी लोकप्रिय हुन्थ्यो । तर, यी सबैमा प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय गर्नुभयो, एक्लै सक्रिय हुनुभयो ।
५ वर्षका निम्ति नेकपाको सरकार रहनेमा कुनै शंका छैन । स्थिर रूपमा नेकपाको सरकार रहन्छ । व्यक्ति फेरिने कुरा सामान्य हो ।
प्रधानमन्त्रीसँग तपार्इंको छलफल हुन्छ ?
उहाँले बोलाए पो हामीले छलफल गर्ने हो । उहाँले बोलाउनुभएको छैन । नबोलाएपछि हाम्रो भेटघाट र कुराकानी पनि खासै हुँदैन ।
अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन र भारत भ्रमणपछि सरकारको नेतृत्व आलोपालोको प्रसंग पुन: चर्चामा आएको छ । के यो प्रधानमन्त्री फेरिने संकेत हो ?
दुई अध्यक्षबीच के सरसल्लाह भएको छ, के–के सहमति भएका छन्, उहाँहरूले खोल्न बाँकी छ भने हामीलाई थाहा छैन । होइन भने अब पार्टी एकीकृत भइसक्यो । एकीकृत पार्टीले आवश्यक परे सरकार पुन: गठन, मन्त्री हेरफेर गर्नु सामान्य हो । ५ वर्षका निम्ति नेकपाको सरकार रहनेमा कुनै शंका छैन । स्थिर रूपमा नेकपाको सरकार रहन्छ । व्यक्ति फेरिने कुरा सामान्य हो । कार्यकाल आधा–आधा गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको कुरा आएको छ । यसको सत्यता के हो, हामी पनि बुझ्छौँ ।
पार्टीभित्र सरकारको समीक्षा हुँदैन ?
अहिलेसम्म खासै समीक्षा भएको छैन । सरकारबारे स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर निर्मम समीक्षा हुन आवश्यक छ । किनभने, यो सरकार असफल भयो भने त हाम्रो सिंगो पार्टी पनि डुब्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि डुब्छ । त्यसैले सरकारलाई डुब्न नदिन, गल्ती–कमजोरीबाट बचाउन र राम्रा कामका निम्ति सरकारको समीक्षा हुन आवश्यक छ ।
तपाईंहरूसँग लामो समय प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको अनुभव छ । अहिले सत्तापक्षको कुर्सीबाट हेर्दा कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ?
कांग्रेसको प्रतिपक्षी भूमिका प्रभावकारी र रचनात्मक देखिएन । जति उच्च र स्तरीय हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । सरकारले प्रतिपक्षका व्यवहारलाई जवाफ दिने मुखले होइन, व्यवहार र कामले हो । असल काममार्फत जवाफ दिइयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । दन्तबझानमा लागियो भने त्यसले सत्तापक्ष मात्र होइन, प्रतिपक्षलाई पनि फाइदा गर्दैन ।
प्रकाशित: आश्विन ९, २०७५